80.000 qof oo wadanka laga musaafurinayo, Soomaalidu maku jidhaa? | Somaliska
80.000 qof oo wadanka laga musaafurinayo, Soomaalidu maku jidhaa?
Dowlada Sweden ayaa shaacisay in wadanka laga musaafurin doono 80.000 qof oo ka tirsan qaxootigii dhawaan sharciga loo diiday. Wasiirka arimaha gudaha Anders Ygeman ayaa sheegay in dadkaan wadanka qasab looga saari doono oo lagu daabuli doono diyaarado ay soo kireysatay dowlada Sweden.
Laanta Socdaalka iyo Booliska ayaa amar lagu siiyay in ay diyaariyaan qorshihii dadkaan wadanka looga musaafurin lahaa. Dadka la musaafurinayo ayaa waxaa u badan kuwa ka soo jeedda Yurubta bari sida Kosovo, Bosnia iwm. Dowlada ayaa sidoo kale musaafurin doonta dadka ka yimid wadamada xasiloon ee ku yaala waqooyiga Afrika sida Algeria, Morocco.
Soomaalida sharciga loo diiday ayay u badantahay in aan qasab lagu saari doonin balse lagu amri doono in ay si iskood ah wadanka uga baxaan. Siyaasadaas ayaa ahayd middii ay ku dhaqmeysay dowlada Sweden sanadihii dambe, iyadoo qaasatan dadka ka soo jeeda waqooyiga Somalia lagu amro in ay wadanka ka baxaan. Wasiirka ayaa sheegay in dadka iskood uga baxaya wadanka la siin doono taageero dhaqaale.
Si kastaba ha ahaatee , dowlada Sweden ayaa u muuqata mid culeys weyn saaranyahay oo taageerada ay shacabka ka haysato aad hoos ugu dhacday halka mucaaradku ay codkooda siyaaday. Sidaa darteed ayaa laga yaabaa in dowladu ay ku kacdo ficilo xagjir ah si ay u soo jiidato codka Swedishka.
Mubarik: Soomaalida waa in baasaboorka lagu siiyaa 5 sano
Saudi Arabiya miyeey Noqotay swehen?teeda Kale dadkan
Eey iska heestan hadesan wax sineen mey mareykan iyo Canada kuwarejiyan ayaga ubahane,dadka qaar waxa ku jira dad Xuquudoodi qqxotnimo lagu tuntay,Swedhen weey kasoo daresa Somalidu meel lagu celin karo ma jirto oo waa iska cadahay taas wadankodi waa kawaanaka shacabka,
marka hore anigu waxan oran laha ilahay umada somaliyad haka dulqado kurbada iyo dhiibka haysta meel kasta aay joogan marka xiigta intti sogashay sweden mar hore wan dareemaya oo dhiib aya haysta oo rabii hawaga soqado sharciga galadan intii aan sogalina haka fiirsadan in aay xoolohoda ku soqasariiyan yurub waayo wan wada ognahay oo maalayin dollar ayay ku yiimadan to yurub ka jooga qurbe wax mayalanee dadka ya been losheegin wadaankene hadii aad ka berato gaalay wad dhaargaysaa beerta beerahaa
hala celiyo maxuma ee qofka heeysta 3diidmo malaga yaabaa inlasiiyo lacag mise af maran ayeey celinayaan dadka su aashaas ayaa rabaa wax iiga jawaaba hadii aad wax igu dhaantaan mahadsanidiin
Bashiir waxaan umalaynaa inaad hurdayso hadaad sadax diidmo haysato oo aad rabto inlagu celiyo waa miday rabaan sweden hadaad dalbato waalagu sinaa lacag laakin gacanta lagama saaro waxaa lagu leeyahay xaga tag anagaa kusoo dirayno sheego xawaalada aan kugu soo dirno ama waxay ku leeyihiin hey;adaas la xariir
khaliif qaadiriyo says:
waa iska ok hadii la celinaayo dadka yurub ka imaaday .
maxaa yeelay dalkooda waa iska fiicanyahay.dowladaan way is xoreynoosaa
maxaa yeelay culees ayaa soo fuulay soomaalida ilaahay ha ka qabto iyo waxii muslin ah.
Rabi talo ku filan.
ahmed shuushuule says:
ilaah ha idinka qaado culeyska
February 7, 2016 at 21:50
Wll jimcaale abaayasha Negative ta haysta lkn caruurtodu Uppehållstillstånd haystaan maku jiraan dadka la celinayo? Hadaad wax ka ogthy iisheeg illhy uma Islamka iyo Somalidaba how saqiro
February 7, 2016 at 21:51
Qofkii igu dhaama plz haysoo jawaabo walaalayaal.